Sarimihetsika PTFE Filter
Ny sarimihetsika sivana PTFE dia manararaotra ny fiasa fibril-nodin'ny PTFE ary amin'ny alàlan'ny press press, fanitarana press, de-mamatotra, fihenam-bidy avo lenta ary famolavolana endrika ka ireo vokatra miaraka amin'ny faritra malama, fanoherana simika, rivotra mifofofofofofofofofofofofofofofofofoonaika), mahazaka afo, avo fanoherana ny toetr'andro, fanoherana asidra mahery sy alkaly ary tsy fanapoizinana. Ny diametera aperture, ny hateviny ary ny porosity dia azo ahitsy amin'ny famelarana mifanaraka amin'ny fangatahana samihafa. Ireo vokatra azo ampiharina ambonin'ny ...
Sarimihetsika PTFE nofenoina
Sarimihetsika vita amin'ny PTFE no fenoina, nofenoina sisiny iray, fametahana silôly; coefficient ambany amin'ny fikorontanana; fanoherana miavaka miavaka, izay mitovy amin'ny fiakaran'ny fiakarana 500 mahery amin'ny PTFE mahazatra; tsy mihinana simika; fanoherana ny hafanana avo lenta; Endri-javatra: Ity rakipeo ity dia manana fonosana manosotra tena sy mpanohana mifanaraka. Ny fananganana kasety dia miorina, tsy misy poizina ary mahatohitra ny toetr'andro.
Tape Film PTFE 5-mil
5 tapitrisa ny hatevin'ny famokarana novokarina avy tamin'ny lamba fitaratra nofinofy PTFE izay nopetahana adhesif silônaly "hafanana be". Ny PTFE dia manome velarana matevina manohitra kibay raha toa kosa ny lamba fitaratra dia manome tanjaka sy fitoniana refin-damosina Famerenana: PFTE Glass Cloth Adhesive Type: Silicone Total Thickness (mil): - Backing Thickness (mil): 5.0 mil Adhesive Thickness (mil): 2.0 mil Firaisana amin'ny vy (Oz / in): 45 ...
Tape sarimihetsika PTFE 3m
Ny taratasy plastika PTFE dia tonga ao anaty horonana ao amin'ny .005 - .020 hateviny. Raha manafatra mihoatra ny 1 pc ianao, dia hokapaina avy ao anaty horonana. Amin'ny hateviny lehibe kokoa noho ny .020, mitahiry 48 x 48 izahay ary manapaka ny fiakarana hitanao voatanisa. Amin'ireto habe ireto dia misy azo refesina na refesina! Ny PTFE dia manana ny teboka avo indrindra ary afaka manohy serivisy amin'ny 500F (260 C). Ny FEP dia resin azo zahana miempo afaka manohy serivisy amin'ny 400F (204 C). Ny vokatra PTFE dia ampiasaina ho gasket sy fonosana materia ...